भारतको गोवामा नेपाली गीत ‘छ कि छैन् तिमिलाई थाहा’ यस्तो देखियो ! (हेर्नुहोस भिडियो)
गोवामा छायांकन गरिएको ‘छ कि छैन् तिमिलाई थाहा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । नितिन चन्दको दोश्रो निर्देशकिय सिनेमा तथा रुप पोखरेल र आरोही सिंहको डेब्यू सिनेमा ‘गीत गजल’को पहिलो गीत रिलिज भएको हो । भारतको गोवा र नेपालमा छायाँकन गरिएको ‘छ कि छैन् तिमिलाई थाहा’ बोलको गीतमा मुख्य कलाकार रुप र आरोहीलाई फिचर्ड गरिएको छ ।
गीतमा संगीतकार अर्जुन पोखरेलको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा अन्जु पन्त र सुरेश लामाको स्वर छ । गीतलाई सुरेश काफ्लेले छायाँकन गरेका हुन् । आरोहण प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको सिनेमा रश्मी भट्ट, विशाल पहाडी, ओम प्रतीक, आज्ञा करनजीत, सान्तवना भट्टराई, भिमा मैनाली बालकलाकार योगीशा खत्री, सुजल खानलगायतका कलाकारको पनि अभिनय रहेको छ । आगामी असोज २४ गते रिलिज हुने सिनेमाको यस गीतलाई निर्देशक चन्द आफैले कोरियोग्राफी गरेका हुन्। हेर्नुहोस भिडियो !
“एक गरीब परिवारमा एक सुन्दर छोरीको जन्म भयो।” तर उसको बुवा दुखि हुदै मन मनै सोच्न थाल्यो कि छोरा भएको भए त काम मा हात त बढ्थ्यो। उसले छोरीलाई पाल्न त पाल्यो तर मन से नहि। *छोरी ठुलि भएपछि स्कूल पढ्न पनि जान्थिन तर स्कूल कि फिस समय मा दिदैन थियो, कापि कलम मा पनि ध्यान दिदैन थियो नत कहिले छोरीलाई सोध्थ्यो। घरमा छोरी भएको कारण सधै रक्सी पिएर घरमा झगडा गर्थ्यो। तर उसकि आमा धेरै राम्री थिईन।
आफ्नी छोरीलाई धेरै माया पनि गर्थिन्। अनि उसकी आमा उसको बुबालाई थाहा नहुने गरि छोरीलाई स्कूल को फिस दिन्थी र कापि कलम को लागि पनि खर्च दिन्थी। अनि आफ्नो पेट भोकै राखेर च्यातिएको पुराना फाटा टुटा कपडा लगाएरनी आफ्नि छोरीको पुरा ख्याल राख्थि। तर श्रिमान चाहि कहिले काहि घर आउथ्यो जति कमाउथ्यो त्यो सब पैसा रक्सी पिएर सकाउथ्यो। ंसमय बित्दै गयो।
छोरि बिस्तारै_बिस्तारै समझदार हुदै गै।अनि १० कक्षा मा Admission (भर्ती) हुनु थियो तर आमा सँग तेती धेरै पैसा थिएन कि छोरीलाई (high school) मा Admission गर्न सक्थी। छोरी डराउदै आफ्नो बुबालाई भन्थी बुबा म पढ्न चाहान्छु मलाई ठुलो स्कूल मा भर्ना गराई दिनु न बुबा मम्मि सँग तेती धेरै पैसा छैन । छोरीको कुरा सुनेर रिसाउदै चिच्यायर छोरीलाई भने त जति धेरै पढ् लेख तर तैले आखिर गर्ने भनेकै घरको काम गोबर फाल्ने भाडा धुने चुलो चौका नै हो गर्ने धेरै पढेर के काम। तेही दिन घर मा मार पिट झगड़ा देखेर छोरीले आफ्नो बुबाको नराम्रो ब्यवाहार देखेर मन मनै सोचिन कि अब म पढ्दैन।
एक दिन उसकी आमा बजार जानु भयो छोरीले सोधिन आमा कहाँ जानु भाथ्यो तर आमाले अनसुने जस्तो गरेर भनिन् भोलि तेरो ठुलो स्कूल मा Admission गराई दिन्छु। अनि छोरीले भनिन् आमा अब म पढ्दैन मेरो कारणले हजुरले कति धेरै दुःख गर्नु भाको छ अनि बुबा पनि हजुर पिट्नु हुन्छ त्यो पनि मेरो कारण ले अब म पढ्दिन्न अनि भन्दा भन्दै छोरी रुन थाली अनि आमाले आफ्नो काख मा राखेर भनिन् छोरी न रौ म तिम्रो आमा हो तिम्रो ईछ्या हरु मैले पुरा न गरे अरु कसले गर्छ मैले बजार बाट केहि पैसा लिएकि छु भोलि म तिम्रो Admission गराई दिन्छु।
अनि छोरीले आमालाई हेर्दै सोधिन आमा यति धेरै पैसा कहाँ बाट ल्याउनु भयो । आमाले फेरि अनसुने जस्तो गरिन। समय बित्दै गयो। आमाले दुःख कष्ट गरेर छोरीलाई पढाउनु लेखाउनु भयो। अनि छोरीले पनि आफ्नि ंआमाको मिहिनेत देखेर आफु पनि मन लगाए दिन रात पढ्न थालिन्। अनि अगाडि बढ्दै गई । अनि उता बुबा रक्सी पिएर हुनुभयो अस्पताल मा डाक्टर लाई देखाउनु भयो डाक्टर ले भने उहाँलाई टि बी भएको छ। एक दिन बुबालाई स्वास्थ्य समस्या का कारण उहाँ बेहोश हुनु भयो अनि अस्पताल मा लगेर भर्ती गरिदिए।
पछि होस आए पछि डाक्टरनी को अनुहार देखेर उसको होस उड्यो। वो डाक्टरनी अरु कोई न भएर उसैकि छोरी थि । अनि लाज मानेर कपडाले आफ्नो अनुहार लुकाउन थाले अनि रुदै हात जोडेर भने छोरी मलाई माफ गरि देउ । मैले तिमीलाई बुझ्न सकिन्। ं(छोरी त आखिर छोरी नै हुन) बुबालाई रोएको छोरीले देख्नै सकिन्न अनि आफ्नो बुबाको गले लागेर भनिन् बुबा मलाई पनि छोराको जस्तै माया गरेर हेर्नुस् न है म तपाई को नजर मा छोरा नै नजर आउने छु।
अनि एक दिन छोरीले आमालाई सोधिन आमा आज सम्म भन्नु भएन कि मलाई पढाउन को लागि पैसा कहाँ बाट ल्याउनु भाको थियो। छोरीले बार बार सोधे पछि आमाले भन्नु भयो छोरी मैले आफ्नो शरिरको Blood बेचेर Admission गराएकि थिए। त्यो सुनेर छोरी रुन थालिन्।
तेसैले त आमालाई भगवान सँग तुलना गरिन्छ।
जति आमाले आफ्नो बच्चाको लागि त्याग गर्न सक्छिन् ,
त्यती त्याग दुनियाँ मा कसैको रहदैन ।